Isikhokelo sobungakanani bemithwalo enamavili-Iindaba-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Isikhokelo sobungakanani bemithwalo enamavili
La ngamaqhekeza afanelekileyo kubantu abafuna umthwalo omncinci, onamavili ukuba baqhubele kuwo inqwelomoya. Uninzi lweetot ezinamavili ziya kulunga phantsi kwesihlalo, kwaye zincinci ngokwaneleyo ukuba zinokuphuma ngokulula nangaphandle kwimigqomo yokugcina ngaphezulu. Iivili ezinamavili zinokubamba utshintsho olunye lwempahla, iincwadi, iimagazini, kunye nazo naziphi na ezinye izinto ezincinci ongathanda ukuhamba nazo kwindiza.
18 ″ - 20 ″ Yithwale Umthwalo
Oku kuthathwa njengobungakanani bamazwe aphesheya, njengoko bevunyelwe njengokuqhubela uninzi lweenqwelomoya. Zilungele uhambo lweentsuku eziyi-1-2, njengoko zinendawo yokupakisha iimpahla ezimbalwa, izihlangu, kunye nezinto zokuhlamba.
21 ″ - 22 ″ Ukuqhuba nomthwalo
Obu bobona bukhulu budumileyo bokuthwala imithwalo yeenqwelo moya zaseMelika. Iinqwelo-moya ezininzi zase-US zinezithintelo ezingama-22 ″ x 14 ″ x 9 or, okanye ii-intshi ezinemigca engama-45. Obu bubungakanani obulungele abahambi beshishini okanye iihambo zempelaveki, njengoko uninzi lweziqwenga zobukhulu zinokusongelwa okanye umkhono wengubo osuswayo onokubamba isuti enye okanye ilokhwe kwaye unendawo eyaneleyo yokupakisha iimpahla ezimbalwa, izibini ezibini zezihlangu, kunye Izinto zokuthambisa. Uninzi lunendawo yokwandiswa, evumela ii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-4 zokupakisha, kodwa xa zandisiwe ezi zinto zinokugqitha kuthintelo kwaye kuya kufuneka zihlolwe.
23 ″ - 24 L Imithwalo emincinci ekhangelwe
Obu bungakanani buthandwa ngabahambi abakhangela into encinci, elula yokujonga umthwalo. Ezi ziqwenga zinkulu kakhulu ukuba zingathwalwa yindiza, kodwa zilungele uhambo lweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5. Kukho indawo enxibe iimpahla ezi-2 ukuya kwezi-3, izihlangu ezimbalwa kunye neekiti zangasese. Isuti (isongelwe ngaphandle okanye umkhono wengubo ekhutshwayo) inesithuba esifikelela kwisuti ezi-2 okanye iilokhwe.
25 ″ - 27 ″ Imithwalo ejongiweyo
Obu bungakanani bobona bukhulu bathandwayo bemithwalo ekufuneka uyijongile. Zilungele uhambo lweentsuku ezi-5 ukuya kwezi-7, okanye ngaphezulu, kuxhomekeke kwindlela opakisha ngayo. Banomthamo omkhulu weempahla ezininzi, izihlangu kunye nezinto zokuthambisa. Umkhwetha (isongelwe ngengubo okanye umkhono wengubo ekhutshwayo) angabamba iisuti ezibini ezishinyeneyo kunye nelokhwe ezine. Olu lolona khetho lulungileyo ekujongeni imithwalo, banamagumbi amaninzi okupakisha kodwa ngekhe uphule umqolo wakho ukuzama ukuhambisa.
Iisutikheyisi ezingama-28 ukuya kuma-32
Ezi ziityesi ezinkulu kakhulu ezenzelwe iihambo ezingaphezu kweveki. Banesakhono esikhulu kuyo nantoni na ongathanda ukuhamba nayo. Ngenxa yobukhulu bayo obukhulu, xa zipakishwe ngokupheleleyo kunokuba nzima ukuziqhuba kwaye zingadlula kwi-50 lbs. izithintelo zobunzima ezenziwa ziinqwelomoya ezininzi zaseMelika. Kunye nezithintelo zobunzima, uninzi lweenqwelo moya zase-US zinesithintelo sobungakanani bee-intshi ezingama-62 and kwaye obu bungakanani bunokudlula kubungakanani, ngakumbi xa sandisiwe. Kodwa ukuba uyazi ukuba ufuna owona mthwalo mkhulu, iya kuba yeyakho.